अवसर पाए अझै काम गर्छु : कंसाकार | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
अवसर पाए अझै काम गर्छु : कंसाकार
काठमाडौँ, १० फागुन : विगत २२ वर्षदेखि नियमित दैनिकी जस्तै छ, बाबा रामदेवको योग । त्यतिबेला रामदेव को हुन् भन्ने कुरा नेपालमा धेरैलाई थाहा थिएन । उनकै अनुशरण गरेकाले नै हुनुपर्छ स्वास्थ्य राम्रो छ । जीवनभर नेपाली जनताको सेवा गरेकाले पनि मलाई निजी क्षेत्रका कुनै पनि संस्थाले तान्न सक्दैनन् ।
पटकपटक निजी क्षेत्रको संस्थाको नेतृत्व लिइदिनुप¥यो भनेर प्रस्ताव पनि आए, आइरहेकै पनि छ । मलाई किनकिन निजी क्षेत्रमा जानै मन लाग्दैन । स्वास्थ्यले साथ दिउञ्जेलसम्म नेपाली जनताको नै सेवा गर्ने इच्छा छ । यी भनाइ हो सुगतरत्न कंसाकारको । उनलाई चिनाउन कुनै विशेषण लगाउनु पर्दैन । चार वर्ष तीन महिना नेपाल टेलिकमको प्रमुख तथा छ वर्ष नेपाल वायु सेवा निगमको प्रमुख भएर आफ्नो योग्यता र क्षमता देखाएका कंसाकारले कमलादी गणेशस्थान नजिकै आफ्नो निवासमा आफ्नो व्यवस्थापकीय कलाका अलावा टेलिकमको प्रवेश तथा निमगको सुधारका बारेमा राससलाई अनुभव सुनाए ।
पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यापारिक भए पनि आफ्नै रहरले दूरसञ्चार सेवामा प्रवेश गर्नुभएका कंसाकारलाई आजको टेलिकमलाई व्यावसायिक रुप दिएको श्रेय जाने गरेको छ । टेलिकमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्दा उनी नै टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक थिए । दूरसञ्चार संस्थानको अन्तिम महाप्रबन्धक कंसाकार भएकै बेला टेलिकमको सात प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर कम्पनी बनाइएको थियो । आफैँले सिकाएका र तातेताते गरेर हिँडाएकाले नै आजको टेलिकम चलाएका छन् ।
म इञ्जिनीयर हुँ, तर सँगसँगै व्यवस्थापक पनि हो । संसारभर प्रकाशित भएका व्यवस्थापनसम्बन्धी धेरै जसो किताब र जर्नल पढेको छु । जिन्दगीभर नै व्यवस्थापनसँग जोडिए । काम गरे । नजानेको कुरा सिके, जानेको कुरा लागू गरेँ विस्तार गरेँ । उनले अगाडि जोडे , “सरकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन आफैँमा जटिल काम हो । मलाई जटिल काम गर्न नै मन पर्छ । जुन मैले विगतमा गरेँ । आगामी दिनमा राम्रो प्रस्ताव आए पछि हट्दिन । किनकी मैले तीन करोड नेपालीको आस्था जोडिएका दुई महत्वपूर्ण संस्थामा जीवन गुजारेको छु ।”
निजी क्षेत्रले राम्रो सेवा सुविधासहित प्रस्ताव गरेको उनले सुनाए । कुनकुन संस्थाका प्रस्ताव आए ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “भन्न मिल्दैन । तर पछिल्लो पटक पनि घरमै आएर प्रस्ताव गरे ।” आफूलाई निजी संस्थामा गएर काम गर्न मनले नै नमानेको उनले बताए । जिन्दगीभर नेपाली जनताको सेवा गरेको भएकाले पनि मलाई निजी संस्थाले तान्न सक्दैन । निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनभन्दा सार्वजनिक संस्थाको व्यवस्थापन गाह्रो काम हो । त्यसमा राजनीतिकदेखि अनेकन कारण जोडिन्छन् । कंसाकारले भने, “गाह्रो काम नै किन नगर्ने भन्ने मलाई लाग्छ ।”
कंसाकारको परिवार नै व्यापारी हो । ठूला बा, काका अझै व्यापारमा छन् । उनको १३० जनाको परिवारको एक्लो सदस्य हो, उहाँ सरकारी सेवामा जाने । असनमा अझै पनि सेतो कपडाको पसल छ । त्यो उनको परिवारको पसल हो । “म व्यापारिक पृष्ठभूमिको भए पनि निजी क्षेत्रमा जाने पटक्कै इच्छा छैन । मनमा आउँछ, अब त चुपचाप घरै बसौँ कि ? अर्को मनले भन्छ होइन, स्वस्थ छु, काम गर्न सक्छु भने किन चुप बस्ने ? म आफैँ ‘चान्स’ पाएको खण्डमा अवकाश हुने पक्षमा छैन”, उनले सुनाए ।
उनले व्यवस्थापन ‘अब्स्ट्रयाक’ विषय भएको पनि बताए । “के ग¥यो भने राम्रो व्यवस्थापन हुन्छ ? भनेर जानेकालाई समेत मैले सोध्ने पनि गरेको छु”, उनले भने । विसं २०३१ मा सातौँ तहको टेलिकम इञ्जिनीयरका रुपमा सेवा प्रवेश गरेका कंसाकारले ३४ वर्ष सेवा गरे । अघिल्लो र पछिल्लो कार्यकाल गरेर नेपाल वायु सेवा निगममा छ वर्ष काम गरे।
परिवारका तीन दाजुभाईमध्ये कान्छा हुनुहुन्छ कंसाकार । “ठुल्दाइको ‘ब्रेन ट्युमर’का कारण निधन भइसकेको छ, माल्दाइको अझै चियाको व्यापार छ । उनले तयार पारेको चियाँ चीनको तिब्बतसम्म जान्थ्यो”, उनले पारिवारिक पृष्ठभूमि भने ।
ठमेलको अस्कल क्याम्पसबाट आइएस्सी गरेपछि कंसाकारले ‘कोलम्बो प्लान’को छात्रवृत्ति पाए । टेलिकम इञ्जिनीयर भन्ने धेरैलाई थाहै थिएन । तर मैले धेरैले थाहा नपाएको सोही विषय पढ्ने मन गरेको उनले सुनाए । आफ्ना पिता यस्तो पनि इञ्जिनीयर हुन्छ भन्दै झगडा नै गर्न जानुभएको स्मरण उनलाई ताजै छ ।उनले भने, “घर, सडक बनाउने पो इञ्जिनीयर हुन्छ त ? यस्तो पनि इञ्जिनीयर हुन्छ भन्दै मेरा पिताले झण्डै जान नदिएका थिए ।” ठूल्दाइका कारण आफूले सो विषय पढ्न पाएको कंसाकारको भनाइ छ ।
छात्रवृत्ति पाएर कोलकाता गए पनि त्यहाँ ‘नक्सलाइट’का कारण धेरैजसो समय क्याम्पस बन्द भएका कारण उनी पुनाबाट टेलिकम इञ्जिनीयर उत्तीर्ण गरे । दुई जना केटा टेलिकम इञ्जिनीयर पढेर आएका छन् भन्ने थाहा पाएर तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार समितिले कंसाकार र उहाँका अर्का साथीलाई ज्यालादारीमा नियुक्त ग¥यो । यो कुरा विसं २०३१ को थियो । रामप्रसाद शर्मा समितिका प्रमुख थिए । प्रमाणपत्र नै छैन, सर, हामीले त परीक्षामा नै उत्तीर्ण भएका छैनाँै भन्दा तिमीहरु चुप लाग भन्दै जागिर दिएको आजै जस्तो लाग्छ, कंसाकारलाई ।
पान पसल र निगममा केही फरक छैन भन्ने बुझाइ छ कंसाकारको । पान पसलले पान बेच्छ, निगमले सिट बेच्छ । दिनभरको कमाइ हिसाब गर्ने पान पसले र सिट बेचेको हिसाब गर्ने निगमको व्यापार शैली उस्तै हो । निगमले सेवा विस्तारका लागि लगातार जहाज खरिद गर्नुपर्नेमा २० वर्षसम्म कुनै जहाज किन्न सकेन । दूरगामी सोच नै भएन । भएका जहाजले सेवा त दिए, तर त्यो पुग्दो भएन । आन्तरिक उडानमा रहेका दुई वटा ट्वीनअटर ४५ वर्ष पुराना भए । हामीले उत्पादन क्षमता नै बढाएनौँ, जसका कारण निगम धरासायी हुन पुग्यो । पछिल्ला दिनमा दुई वटा न्यारोबडी र दुई वटा वाइडबडी जहाज ल्याएपछि मात्रै निगमको प्राण भरिन पुग्यो भन्छन कंसाकार ।
निगमसँग भएका दुई वटा बोइङले २२ वर्ष धान्नु प¥यो । विगतमा गएका गन्तव्यमा ती नै थोत्रा जहाज लिएर जाने अवस्था थिएन । भएका जहाज भने पूर्ण क्षमतामा चले । अमेरिका, जापान कोरिया किन नजाने भन्ने प्रश्न नउठेको पनि होइन, तर जहाज नै नभएपछि अपेक्षा गरेर पनि केही हुने अवस्था थिएन । संसारका जुन देशमा पर्यटन उद्योग फस्टाएको छ, त्यसको पछाडि राष्ट्रिय ध्वजावाहककै प्रमुख भूमिका रहेको उल्लेख कंसाकार ।
विदेशी एयरलाइन्स मात्रै दुई दर्जन बढी नेपाल आउँछन् । तिनले ९० प्रतिशत व्यापार गरिरहेका छन् । निगमको स्वामित्व घटेर १० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जहाज थपेर, गन्तव्य विस्तार गर्ने हो भने एकाध वर्षमा ‘कायापलट’ गर्नसक्ने सामथ्र्य निगमसँग रहेको कंसाकारको मनमा अझै छ । धेरै जहाज किन, व्यापार व्यवसाय बढाउ भनेर प्रेरित गर्नुपर्नेमा उल्टै गाली गरिएकामा कंसाकारलाई चित्त दुखेको छ । उनले हाँस्दै भने, “नियम प्रक्रिया मिलाएर धमाधम जहाज ल्याऊ, सेवा विस्तार गर, लौ कंसाकार ठिक छ, तिमीले ठीक ग¥र्यौं भन्नुपर्दथ्यो । मैले त दुःख पाए पाए, मसँगै काम गरेका मेरा कर्मचारीलेसमेत दुःख पाए ।”
राम्रो नेतृत्व गर्ने हो भने निगमलाई व्यावसायिक बनाउन कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । कर्मचारी मात्रै खराब हो भनेर आफूले नपत्याउने उनको दाबी छ । संसारभर नै वायु सेवामा हेरिने भनेको जहाज समयमा उड्छ कि उड्दैन भन्ने हो । यस्तै दोस्रो कत्तिको उडान रद्द हुन्छ वा पैसा कमाएको छ कि छैन भन्ने हेरिन्छ । त्यसमा निगम सबल मात्रै नभई सफल पनि रहेको तथ्य पेश गर्छन कंसाकार ।
कंसाकारले आन्तरिक बजार विस्तारका लागि समेत विगतमा नै योजना बनेको स्मरण गर्नुहुन्छ । तीन करोड नेपालीको संस्था भएकाले विकट ठाउँमा यात्रु छैन भनेर सेवा बन्द गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट पैसा कमाउने र आन्तरिक उडान विस्तार गर्न सकिने कंसाकारको बुझाइ छ । ट्वीनअटर, एटिआर वा बमबार्डियर जहाज ल्याएर दुर्गममा सेवा विस्तार गर्ने तथा सुगम गन्तव्यमा प्रतिस्पर्धी निजी संस्थाभन्दा सस्तो मूल्यमा सेवा दिन सकिने कंसाकारले बताए । निगमले सुगम गन्तव्य खोस्ने भए भनेर निजी विमान कम्पनीलाई समस्या परेको पनि हुन सक्छ । सार्वजनिक संस्था भएकाले निगमले सेवा विस्तार गर्नैपर्ने हुन्छ ।
तीन करोड नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयसँग जोडिएको संस्था हो निगम । आफू त्यस्तो संस्थासँग जोडिन पाएकामा उनलाई खुशी अनि गर्व पनि लाग्छ । निगमलाई राम्रोसँग लिएर जाँदा नेपाल टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणलाई उछिन्न सक्ने स्थिति उन्ला देख्छन । रु नौ अर्बको कूल कमाई गर्ने निगमले दुई वटा वाइडबडीका कारण मात्रै थप रु १६ अर्ब कमाई गर्न सक्छ । संसारभर नै शून्य जोखिम भएको व्यापार कुनै पनि हुँदैन । नेपाल सरकारले केही जोखिम उठाएर निगममा लगानी गरे त्यसबाट एकाध वर्षमा नै ठूलो प्रतिफल हासिल गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कूल ऋणमध्ये रु एक अर्ब त निगमले तिरिसकेको छ ।
आफू निमगको प्रमुख रहँदा डेढ वर्ष पहिल्यै पाँच वर्षमा १५ वटा जहाज पु¥याउने योजना बनाएको स्मरण उनले सुनाए । जहाज खरिदका लागि ऋण लिन डराउन नहुने उनले बताए ।उनलाई यस्तो लाग्छ–भारतमा नै सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत हवाई सम्झौताअनुसार ११ शहरमा हवाई सेवा दिन सकिन्छ । सवा अर्ब जनसङ्ख्या भएको देशबाट ठूलो मात्रा पर्यटक ल्याउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण, सार्वजनिक संस्था चलाउन केही जटिलता रहेको अनुभव छ कंसाकारको । खाद्य संस्थानले चामल किन्दा र निगमले वाइडबडी जहाज किन्दा पनि एउटै ऐन आकर्षित हुने व्यवस्था सही कि गलत ? चामल र जहाज किन्न एउटै ऐनले काम गर्न नसक्ने भएकाले त्यसमा सुधार जरुरी भएको उनले भन्ने । निर्णय, प्रक्रिया पु¥याएर जहाज खरिद गर्न पाउनुपर्ने र त्यसका लागि सरकार आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । “दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने भए सरकारी निकायमा काम गर्ने प्रक्रिया छोटो बनाउनुपर्छ ।” पछिल्ला दिनमा एयरलाइन्स समस्यामा परेका छन् । छिमेकी देश भारतको जेट एयर बन्द नै भयो । एयर इण्डिया समस्याग्रस्त छ । लुप्mथान्सा पनि घाटामा छ । थाई एयर घाटा भएर चार वटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिसके ।
संसारभरका नागरिक नेपाल घुम्न चाहन्छन् । औसतमा हेर्ने हो भने नेपाल आउन चाहनेले महङ्गो हवाई भाडा तिर्नुपर्छ । भेटेका विदेशी नागरिकले आफू नेपाल आउन चाहे पनि हवाई भाडा असाध्यै महङ्गो भएको गुनासो गर्ने गरेको कंसाकार सुनाए । उनले त्यसका लागि निगमले सेवा विस्तार गरेर भाडामा समेत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनलाई लाग्छ भाडामा केही सहुलियत हुने हो भने पोखरा र काठमाडौँमा गोष्ठी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि मात्रै सयौँ विदेशी संस्था आउनसक्ने अवस्था विद्यमान छ ।
लण्डनको हिथ्रो एयरपोर्टमा एशियन मुलुकलाई तीन स्लट उपलब्ध गराउने कुरा आएको छ । हामी कालोसूचीमा रहेका कारण निगमले पाउने सम्भावना कम छ । त्यो स्लट पाएको खण्डमा निगमको वाइडबडीले सोझै काठमाडौँ–लण्डन उडान भर्नसक्ने उहाँको विश्वास छ ।रासस
कैलाली, १६ चैत : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तबीच आज
परीक्षणको व्यवस्था जिल्लास्तरमा पुर्याउन डा कोइरालाको सुझाव
आज २०७६ चैत्र १६ गते आइतबारको राशिफल
काठमाडौं, १६ चैत्र । आज श्री शाके १९४१ वि.सं. २०७६ साल चैत्र १६ गते आइतबार
प्राज्ञिकद्वारा सर्वसाधरणका लागि भोजन सहित माक्स वितरण
मोहन श्रेष्ठ । काठमाडौँ, १६ चैत । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्, नेपालले सर्वसाधरणका लागि भोजन सहित
कोरोना संक्रमित सबैको स्वास्थ सामान्य, कोरोनाबारे जानकारी लिन १११५ र ११३३ मा फोन गर्नुहोस्
काठमाडौं, चैत १६ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप एउटा कल सेन्टर स्थापना गरेको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता